SFR အားပြန်သွင်းနည်း- လွယ်ကူပြီး အခမဲ့ ပြုလုပ်နည်း
SFR သည် ပြင်သစ်အတွက် ကြိုတင်ငွေဖြည့် ဆင်းမ်ကတ် အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ထိုနေရာမှ သို့မဟုတ် ထိုနေရာသို့ ခရီးထွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိပါက သင်သည် စာချုပ်များမပါဘဲ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဖြင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ပြီး သင်စားသုံးသည့်အရာအတွက်သာ ပေးချေနိုင်သည်။ ဒီကတ် SFR La Carte ကိုဖြတ်ပါ။ ၎င်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်၊ သင်သည် စာရင်းသွင်းမှုတစ်ခုငှားရမ်းရန်၊ ကြိုတင်ငွေပေး SIM ကိုဝယ်ကာ SMS ပေးပို့ရန်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် သို့မဟုတ် အင်တာနက်အသုံးပြုရန် ခရက်ဒစ်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးသောအခါ၊ SFR အားပြန်သွင်းပြီး ပြန်လည်စတင်ပါ။
ပုံသေစျေးနှုန်း ပေးစရာ မလိုဘဲ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတည်းခိုခြင်း သို့မဟုတ် အံ့အားသင့်စရာ အခကြေးငွေများ မပါဘဲ၊ အကယ်၍ သင်သည် ပြင်သစ်သို့ မကြာခဏ ခရီးသွားပါက Pass ၀ယ်နိုင်သောကြောင့် မကြာခဏ အားပြန်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
SFR SIM ကတ်အကြောင်း
SFR SIM ကတ်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မဝယ် နှစ် ဦး စလုံးအတွက် က်ဘ်ဆိုက် SFR မှ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စတိုးဆိုင်များတွင်သာမက အချို့သော စူပါမားကတ်များ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူများ သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဆိုင်များတွင်ပင်၊ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းကို ၎င်း၏ရောင်းစျေးဖြစ်သည့် ယူရို 10 ဖြင့် ဝယ်ယူရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတွင် အခမဲ့ခရက်ဒစ်၏ € 10 ပါ၀င်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ပေးချေသောအရာသည် ၎င်းတို့သည် သင့်အား ကနဦးပေးဆောင်သည့်အရာဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် SFR ရှိသည်။ ကန့်သတ်အမျိုးအစားများ ဒေတာ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS အတွက်။ အကန့်အသတ်မရှိ SMS နှင့် မိုဘိုင်းဒေတာချိတ်ဆက်မှု၏ ဂစ်ဂါဗိုက်များစွာကို ခွင့်ပြုသည့်အချို့မှ၊ သင့် PC အတွက် LTE modem တွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန် အင်တာနက်သာရှိသည့် အခြားသူများထံအထိ။
SFR SIM ကတ်ကို အသုံးမပြုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိကြောင်း သိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။ သက်တမ်းကုန်မည်။ သင်၏နောက်ဆုံးအားပြန်သွင်းမှု6လပြီးနောက်. သို့သော်၊ €5ငွေဖြည့်ရုံဖြင့် သင့်နံပါတ်ထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကို ဆက်လက်လက်ခံရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီး ကတ်သည် နောက်ထပ်6လအထိ သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကတ်တစ်ခုတောင်ရှိတယ်။ Passive SIM အားပြန်သွင်းစရာမလိုဘဲ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ နှင့် SMS များကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ လစဉ်ကြေးထက် အနည်းငယ်ပို၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခြားရွေးချယ်စရာများလည်း ရှိသော်လည်း စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့် တစ်လလျှင် ယူရို2ကုန်ကျသည်။
SFR လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏လက်ကျန်ကိုစစ်ဆေးပါ။ SFR အား အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ အားမသွင်းမီ။ 950 ကိုခေါ်ဆိုပြီးနောက် wizard ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ 15 မိနစ်အထိ ကြာနိုင်ကြောင်း မှတ်သားထားသော်လည်း သင်၏လက်ကျန်အချက်အလက်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်ဆင့် SFR အားပြန်သွင်းပါ။
SFR အားပြန်သွင်းရန်အတွက် သင်သုံးနိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခု ကွဲပြားခြားနားသည်:
စတိုးတွင် SFR အားပြန်ဖြည့်ပါ။: သင်ဘောက်ချာပေးချေပြီး ကုဒ်တစ်ခုပေးပါမည်။ ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းကို စတင်ရန်အတွက် သင်လက်ခံရရှိထားသောကုဒ်ဖြင့် SMS တစ်စောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ သင်သည် 952 သို့ ကုဒ်နံပါတ်ကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မဟုတ် ထိုနံပါတ်ကို ခေါ်ဆိုကာ အဖြေပြန်စက်မှ ပေးထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
SFR အွန်လိုင်းငွေဖြည့်ပါ။: ဒီကနေပြီးပြီ။ က်ဘ်ဆိုက် SFR မှ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ပြန်လည်အားဖြည့်မှုအတွက်၊ သင်သည် ယူရို5ထက်ပိုပေးချေပါက သင်စတင်ရရှိနိုင်သော်လည်း ယူရို 25 မှ ကောက်ခံနိုင်သည်။ ဘောနပ်စ်ခရက်ဒစ်များ. လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သင့်တွင် ပြဿနာအမျိုးအစားတစ်ခုခုရှိလျှင် သို့မဟုတ် အားပြန်မသွင်းပါက၊ SFR နှင့်ဆက်စပ်သော သင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်မှခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် 1099 ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အဲဒီမှာ မင်းအကူအညီရလိမ့်မယ်။
အခြားသော ကြိုတင်ငွေပေးကတ်အမျိုးအစားများကဲ့သို့ SFR အားပြန်သွင်းခြင်းကို ဝဘ်မှလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ recharge.com သို့မဟုတ်သင့်ထံမှ မိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက်အက်ပ်. သင်၏အားသွင်းဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားရန် နည်းလမ်းတစ်ခု။ ဤပလပ်ဖောင်းတွင် သင်သည် အကြွေးဝယ်ကတ်နှင့် PayPal ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း 140 မှ ပေးချေနိုင်ပြီး ယူရို 5၊ 10၊ 25 သို့မဟုတ် 35 ဘောက်ချာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ဘေးကင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ကုမ္ပဏီများ » SFR အားပြန်သွင်းပါ။
CallYa ကို ဖွင့်နေသည်။
Claro အာဂျင်တီးနားကို အားပြန်သွင်းပါ။
Oi Brazil အားပြန်သွင်းနည်း
မိုဘိုင်းလ်လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြပါသည်။
Cubacel ဖြင့် မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ပါ။
DIGI မိုဘိုင်းဖြင့် အားပြန်သွင်းနည်း
Digitel မိုဘိုင်းကို အားပြန်သွင်းပါ။
မိုဘိုင်းငွေဖြည့်ပါ။ 2022 - သင့်ဆဲလ်ဖုန်းကို အဆင့်ဆင့် အားပြန်သွင်းနည်း